VaTsvangirai Vokurudzira SADC Kugadzirisa Gakava Riri muZimbabwe
Mutungamiriri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vadzoka kumusha neChishanu mushure mekusangana nevatungamiriri venyika dzemuSADC vachivaudza kuti maitiro eZanu PF ekusunga pamwe nekushungurudza nhengo dzebato ravo, anogona kuparadza hurumende yemubatanidzwa.
Vachitaura nevatori venhau mushure merwendo rwavo, VaTsvangirai vati vakasangana nemutungamiri weZambia, VaRupiya Banda, mutungamiri we Mozambique, Va Armando Guebuza, mutungamiri weBotswana, Va Ian Khama, pamwe nemutungamiri weSwaziland, Ishe Mswati, vachivatsanangurira nezvemaipiro aita zvinhu munyika.
VaTsvangirai vati kusungwa, pamwe nekurambidzwa kuri kuitwa bato ravo kuita misangano, kunoratidza kuti zvave pachena kuti vatungamiri vemapato ari muhurumende havachina masimba asi kuti mapurisa nevechiuto ndivo vave kutonga nyika.
Vatiwo zviri pachena kuti kunyange hazvo chibvumirano ichi hachisi kuzadzikiswa, sangano reSADC rinofanira kuumba hwaro hwekuita sarudzo dzakajeka munyika pasina mhirizhonga.
Panyaya yekuti mapurisa ari kuronga kuvasunga nenyaya yekuti vakashora matare edzimhosva nekumiswa pamberi kwedare kwerimwe remakurukota avo, VaElton Mangoma, VaTsvangirai vati kana izvi zvikaitika, Zanu PF inenge yasvika pamagumo.
Asi mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti MDC inofanirwa kuziva kuti zviri kunetsa zvinogadziriswa muZimbabwe kwete nedzimwe nyika.